Iza aho? Fizarana 1: Beautiful nefa tapaka — Trip LEE - OFISIALY SITE
Iza aho? Fizarana 1: Beautiful nefa tapaka
Ity lahatsary ity dia avy amin'ny Mpianatra Ary fihaonambe in Batesville, MS. Masìna ianao, mamelà ny lahatsary sy ny feo kalitao
Ity faran'ny herinandro isika dia handeha hiresaka momba ny maha-. Izany no nanontany ahy ny mpitarika mba hiresaka momba ny, fa izay tsy fantany dia hoe izany no efa zavatra izay Efa eo am-poko sy izay foana aho nieritreritra. Aho niresaka momba izany tamin'ny vondrona tanora eo amin'ny fiangonana any D.C. tena kely.
Koa nahoana no maha teto an foko? Nahoana aho no mihevitra fa zava-dehibe ny mahafantatra hoe iza ianao? Satria raha tsy fantatro hoe iza ianao, tsy fantatrao ny fomba tokony ianao ho velona.
Eritrereto The Bourne Identity. Io lehilahy io mifoha amin'ny sambo, ary tsy fantatro hoe iza izy. Izy nahita ny tsipiriany, ary mandeha ho any Soisa. Ary mahazo any amin'ny ady, ary mahatsapa izy ny fiofanana amin'ny ady. Moa ve tsy ho adala fa raha nahita ianao tsapaka nanana Ninja miafina fahaiza-manao? Fa ny sisa amin'ny horonantsary dia ny nisy nalehany mba hahitana hoe iza izy. Izy mahavita zavatra na dia tsy fantany momba ny. Fa raha tsy hahalala izany, dia tsy ho afaka ny hiaina araka ny tena.
Tsy mihevitra na iza na iza ao amin'ny efitra miafina dia manana fahaiza-manao Ninja, saingy mbola zava-dehibe ho antsika ny mieritreritra momba ny maha.
Ny fomba mahafantatra ny maha manan-be atao amin'ny fomba hanatanterahana ny fiainantsika. Ny tiako hambara, no fantatro hoe iza ianao dia tahaka ny olombelona? Inona ny dikan'izany? Fantatrao ve hoe nahoana ianao eto, Inona ny heviny dia, izay ianao mahavita, izay tena tokony ho manao? Nahoana ianao na dia misy? Iza ianao? Raha tsy mamaly ireo fanontaniana ireo dia afaka mandany ny fiainantsika, miaina toy ny olon-kafa.
Mahamenatra, rehefa mpanohana ny atleta atao maratra na tsy maintsy misotro ronono, ary avy eo ry zareo ho very ny sisa ny fiainany. Satria izany fotoana rehetra izy ireo nieritreritra ny maha-dia maha atleta. Izany no fomba nitondrany azy ireo ny hafa, ary izany zavatra nanaiky. Ka raha izany no hoe iza izy ireo, izay no izy Ho haidiny ny fiainany ho. Ary ankehitriny, fa ny lasa izy ireo dia tsy misy ho velona.
Ary misy ny tanora tovovavy mahafatifaty izy, izay mandeha amin'ny fifandraisana amin'ny fifandraisana, izay ho andevozin'izy ireny ny tarehiny. Satria mihevitra ny maha dia fintinina amin'ny hoe ny ankizivavy tsara tarehy fa ny ry zalahy toy ny. Ary rehefa lazany manjavona, ry zareo torotoro. Izany no toerana nahita ny tanjona. Raha ianao sahiran-tsaina mikasika ny hoe iza ianao, ianao ho sahiran-tsaina momba ny zavatra tokony ho manao amin'ny ny fiainanao-ary izay afaka manana loza vokatra.
Inona no holazainao raha nanontany anao hoe iza ianao? Mpianatra na mpanao fanatanjahan-tena, na mpiangaly rap, na mpitandrina? No, ireo ny zavatra ataonao. Iza ianao?
Tsy afaka aoka izao tontolo izao hamaritra antsika. Tsy afaka aoka ny namana mamaritra antsika. Tsy afaka aoka ny ray aman-dreny mamaritra antsika. Manana ny hamela an'Andriamanitra mamaritra isika, satria Izy no fahefana eo amin'ny raharaha. Raha toa ka tsy fantatsika hoe iza isika, tsy afaka miaina fiainana ny fomba dia natao hiaina.
I Afaka niresaka momba ny zavatra tapitrisa Soratra Masina momba antsika, fa izaho kosa tsy maintsy zarao ho telo. Ny voalohany fa miresaka momba Ho ao izany fivoriana izany dia ny tsara isika natao, fa torotoro. Izay no hevi-dehibe ity fivoriana: isika rehetra no tsara atao, fa torotoro.
Ary tiako ny mijery Salamo 139 voalohany. Miverena any raha ny Baiboly. Raha miverina aho hanome anao fohifohy ny sasany fototra.
Izany rehetra Salamo dia mikasika ny fomba mahalala ny zava-drehetra na aiza na aiza ary tamin'izany andro izany. Fantany rehefa mipetraka Davida ary rehefa hitsangana Izy. Fantany izay mitranga ny hoe mbola tsy milaza izany. Ary na aiza na aiza ny tamin'izany andro izany. Izy any an-danitra, Izy no eto an-tany, Izy na aiza na aiza. Ary Davida nidera an'Andriamanitra noho izay.
Ary manomboka eo amin'ny andininy faha 14 midera an'Andriamanitra toy ny Mpamorona. Ary izy no manome antsika ny tsipiriany ho iza isika.
Hidera Anao aho, satria aho; fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovana; mahagaga ny asanao;, Fantatro fa feno tsara. Ny tenako tsy niafina taminao Fony natao tao amin'ny fiafenan'ny. Rehefa niara-dia noforoninao hisy endrika tany ny halalin 'ny tany, ny masonao efa nahita ahy unformed tena. Ary ny andro rehetra voatokana ho ahy dia voasoratra ao amin'ny boky teo anatrehan'ny iray amin'izy ireo dia i. (Salamo 139:14-16, DIEM)
Andriamanitra nanao antsika. Izay no iaingana ny maha, ary ho velona amin'ny fahazavana izany zava-misy marina.
Ankehitriny aho ny ankamaroan'ny olona mihevitra ho manana ho eto izao hariva izao mahatakatra fa Andriamanitra no Mpamorona. Tsy misy amintsika no nahary ny tenantsika. Tsy araka izay milaza maro, Tsy izahay eto amin'ny fifanojoan-javatra na kisendrasendra. Izany hatramin'izao-haka sy tsy mampino. Fanahy iniana izahay noforonin'Andriamanitra. Ary izany zavatra tsy misy dikany. Izany no mahatonga ny fahasamihafana eo amin'ny fiainantsika, ary mamolavola ny mombamomba.
Fa tiako ho sary an-tsaina mandritra ny fotoana fohy fa Andriamanitra tsy namorona antsika. Ianao eto amin'ny kisendrasendra vintana. Tsy misy iniana tanjona noho ny fisiany. ANDRAMO mba hamaliana izany fanontaniana, inona ianao eto? Ny fiainantsika very dikany rehetra sy ny sarobidy rehefa lasa kisendrasendra loza. Izany dia midika hoe ny fianakaviana dia tsy tena midika na inona na inona, ny fitondran-tena dia tsy misy dikany, ny fotoan-tsarotra tsy manana tanjona. Tena tsara tarehy mahakivy fomba mba hijery izao tontolo izao. ary soa ihany, izany tsy marina. Ny Mpamorona antsika dia nampiseho ny tenany ho ao amin'ny Teniny.
Izay tonga avy, hoy ny maro mikasika ny hoe iza ianao. Ka raha mahita fitaovana firenena hafa, ary tsy afaka mahatakatra ny izay tokony hatao izany, izay no tsara indrindra mba hanontany olona? Ny olona izay nanao azy. Afaka milaza amiko zavatra izany, ary inona izany ho an'ny. Te-handre avy amin'ny Mpamorona, Izay nanao antsika.
ao amin'ny andininy faha 14, Davida milaza fa "mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovana." Inona no dikan'izany?
Inona no dikan'ny hoe ho mahatahotra atao? Izany dia midika hoe Andriamanitra no tsy manary antsika niaraka. Zava-dehibe ny azy. Izy no nanao antsika tamin'ny voninahitra lehibe sy ny tahotra. Tsy hiankina amin'ny kisendrasendra izany na mpandray. Ny manga maso dia amin'ny tanjona, na ny mainty hoditra, na ny lava tongotra. Izany rehetra izany dia amin'ny tanjona.
Tsaroako ny zavakanto na dia nanana mpianatra amin'ny sekoly ambaratonga faharoa, ary izay rehetra nataoko dia mahatsiravina, fa tsy amin'ny tanjona. Misy lovia Neny izany mbola manana ny talantalana tao an-tranonay. Izany no zavatra ugliest ve ianao hahita. Tsy hoe izaho no tsy mahavita manao tsara kokoa. Dia satria tsy miraharaha ampy ny momba izany mba ho tena manome fotoana izany. Fotsiny aho te-haingana ka hamita izany afaka miresaka amin'ny namako. Andriamanitra tsy manary antsika hiara-tsapaka. Ary nanao izany tamin'ny fikarakarana lehibe. Tsara izy norafetiko anao. Eritrereto ny mahay mpanao sokitra, tsara chiseling mandra-pahatongan'izany ny sangan'asa dia tsara tarehy.
Ary hoy Davida izy "mahatalanjona ny nanaovana." Izany dia midika hoe nanao asa lehibe. Mahafinaritra isika zavaboary. Ny olombelona dia mampino.
Izy Mitohy milaza, “mahagaga ny asanao;, Fantatro fa feno tsara.” Midera an'Andriamanitra noho ny fahagagana ataony. Andriamanitra dia mahagaga Mpamorona. Izy no nanao zava-mahagaga. Ary izahay dia anisan'ireo asa mahatalanjon'Andriamanitra. Raha ny tena izy, izahay ny tena mahafinaritra ny rehetra.
Manontany tena aho raha ianao no manome voninahitra an'Andriamanitra dia mendrika ny fahagagana ataony? Ny olombelona dia mampino. Dokotera dia mbola miezaka ny hahatakatra ny saro-tontolo izay ny vatan'olombelona. Taona vitsy lasa izay dia nanana ranomaso amin'ny havokavoka, ary tsy afaka niaina. I nandry tao amin'ny hopitaly fandriana, ary ny dokotera tsy voatery hanao na inona na inona satria ny vatako no efa nikarakara izany. Andro vitsivitsy taty aoriana dia tsara aho. Mahagaga isika. Isika tapaka, fa mbola mahavariana.
Mazava ho azy, Mety hilaza ny olona ny zavatra biby atao fa tsy afaka, tahaka ny biby izay afaka mihazakazaka haingana kokoa na manana hery bebe kokoa. Ahoana no ahafantarantsika ny tena izahay mahatalanjona ampahany zavaboary?
Isika dia nohariana araka ny endriny! tsy misy biby, na fototra, na ny sombin-tany, na ny planeta dia noforonina araka ny endrik'Andriamanitra. Izy no nanao antsika ho tahaka Azy! Andriamanitra no namorona ny zava-drehetra mba hampisehoana eny ny voninahiny, ary izahay ny ampahany amin'ny zavaboary izay mahazo ny mampiseho azy io eny tena mazava tsara, satria izahay izany ny ampahany natao tahaka azy.
Eritrereto izany. Izay ny tena tanjona eo amin'ny fiainana: mba hampisehoana eny Andriamanitra. Novakiko ny mpanoratra iray fa raha oharina antsika sarivongana. Izahay dia toy ny sarivongana 'Andriamanitra eo amin'ny zavaboary. Tsy Andriamanitra izahay, fa izahay tahaka azy. Misolo tena azy isika ary mahazo ny mampiseho ny sary kely indrindra ny azy. Tiako ny sary.
De maninona? Ny kolontsaina dia mampianatra anao mandrakariva ho tsy fahafaliana. Mila izany. Tsy tsara tarehy ianao ampy, Buff ampy, mahia ampy, tsara tarehy ampy, manan-tsaina ampy, na mpanao fanatanjahan- tena ampy. Eny ary ianao tsy tonga lafatra, fa ianao mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovana.
Tiako ho hahita afa-po amin'izany. Ny bandy na ny ankizivavy dia mety tsy mieritreritra tsara tarehy ianao, fa fantatrao izay tena mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovana. Mety tsy ho ny smartest, fa ianao mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovana. Mety ho ny vazivazy corny, fa ianao mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovana. Ianao no tena tsara, mahagaga, mampino famoronana ny Andriamanitra tsitoha. Ary na inona na inona afaka maka izany izy!
Ny sasany amintsika mieritreritra kely loatra ny tenantsika. Mihevitra isika na inona na inona izahay. Izany no lainga. Ianao mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovana. Aza avela na iza na iza hilaza aminareo raha tsy izany. Izay mihevitra fa zava-dehibe be dia be mihoatra noho izay, na olon-kafa dia mety mieritreritra.
Ny sasany amintsika mihevitra be loatra ny tenantsika. Eritrereto Kanye West. Ary mahazo in be dia be ny olana, fa ny izany zavatra izany, hoy izy ny zavatra izay efa mieritreritra ny olon-drehetra. Manana hira antsoina hoe "Izaho dia Andriamanitra." Maro dia maro ny olona mihevitra izany tena ny tenany. Fa Hianao no marina ny zavaboary. Andriamanitra irery no mpahary.
Izany ihany koa dia manana fiantraikany ho fomba mahita ny hafa. Tsy misy zava-poana. Tsy misy olona dia tsy misy dikany. Ny olona tsirairay dia mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovana. Rehefa zava-nitranga dia tsy manan-kialofana tovolahy eny an-dalambe, tsarovy fa tsy misy tsy misy olona. Tsy misy zavatra toy izany ho toy ny tsy misy olona.
Isika Fantatr'i Andriamanitra
Ve na iza na iza in eto hitaiza? Manana tanora zazalahy, ary rehefa mivady te-handeha eo amin'ny daty tsy maintsy fandaharam-potoana tahaka ny telo taona mialoha isika mba hahafahantsika mahazo ny mpitaiza. Fa mandoa ny olona mba hikarakara ny zanakay lahy rehefa isika dia efa. Babysitters foana ny masony ny zavatra izay eo amin'ny fikarakarana. Tsara ny zavaboary rehetra dia ao amin'ny fikarakarana. Ary Izy hitoetra ho mihiratra maso rehetra izany, anisan'izany ianao.
Andriamanitra no nahary ny zavatra rehetra tsy ary avy eo dia aoka ho entina ho any. Andriamanitra dia akaiky mahafantatra ny zava-drehetra izay no mitranga.
“Ny tenako tsy niafina taminao Fony natao tao amin'ny fiafenan'ny. Rehefa niara-dia noforoninao hisy endrika tany ny halalin 'ny tany, ny masonao efa nahita ahy unformed tena.” (Salamo 139:15-16)
Izy no nilaza fa na dia fony Izy tao an-kibo hitan'Andriamanitra azy. Mazava ho azy fa raha ny ao ny kibo tsy misy olon-kafa afaka hahita azy. Tsy mahafantatra betsaka momba azy izany. Fa Andriamanitra mahita azy, na dia izy fotsiny ny habe ny ny voanjo. Andriamanitra no mikarakara azy, manohana azy, knitting azy miaraka.
Rehefa mivady nahita izy bevohoka, izahay nankany amin'ny dokotera ny manaraka Alatsinainy. Ary mety efa nandre Fitepon'ny Fo. Tena kely izy, fa tia azy Andriamanitra ka nanao taminy. Rehefa hitan'Andriamanitra ny kely unformed vatana. Tsy misy na inona na inona izay afa-mandositra ny fijery 'Andriamanitra.
Raha nanadino ny momba anareo Andriamanitra, ianao hahalala. Miaro ny fontsika sy ny havokavoka nikapoka miaina.
Tsy misy amintsika no tsy hita maso. Andriamanitra mahita antsika, ary dia tena liana eo amin'ny fiainantsika. Tokony ho fampiononana ho antsika. Tsy misy na inona na inona fa dia afaka hiampita izany Andriamanitra dia tsy mahafantatra ny. Tsy misy zava-tsarotra, na handratra. Andriamanitra miahy ny zavatra mandratra anao. Tsy voatery hiady ho dikany-you're efa manan-danja.
Ahoana raha toerana tena mpihira hoe ny anaranao avy tao amin'ny TV, tsy izay ho mahatalanjona? Na dia tsy nahazo ny mihifikifi-tànany, dia ho ampy fa fantany fotsiny iza ianao. Mainka mahavariana fa Andriamanitra mahafantatra hoe iza isika. Tokony tsy ho ampy?
“Ary ny andro rehetra voatokana ho ahy dia voasoratra ao amin'ny boky teo anatrehan'ny iray tamin'izy ireo tonga ho.” (Salamo 139:16)
Ny raiko taloha hoe isan-karazany ny zavatra ho ahy izay nitondra ahy adala. Voalohany aloha, izy fa miala fanambarana rehetra nataoko ho karazana fandrahonana. Fa zavatra iray hafa nampiasainy ny hoe dia, “Boy, Fantatro fa tsara kokoa noho fantatrao ny tenanao.” Mety ho ahy ka very saina. Fa avy eo indray andro aho dia nahatsapa fa marina. Nahoana? Satria ny ankizy kely atidoha tsy afaka mahatakatra ny zavatra. Fa ny raiko nahalala.
Andriamanitra mahafantatra ny zavatra momba amintsika fa na dia tsy fantatray, satria tsy Azy izahay. Ny kely atidoha olombelona ny zava-drehetra tsy takatry ny saintsika.
Hoy izy Fantatr'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia hataony talohan'ny mihitsy aza izy teraka. Andriamanitra no mifehy ny zava-drehetra ary fantany ny zava-drehetra. Fantany hoe firy bolo dia ny lohanao. Fantany izay mieritreritra ianao amin'izao fotoana izao. Fantany izay atao anio alina ianao sy ny rahampitso. Andriamanitra irery ihany no afaka mahalala betsaka momba ny olona fito arivo tapitrisa eto an-tany.
Izany no antony tokony mijery ny Baiboly mba hilaza aminay hoe iza moa isika. Satria Andriamanitra no Ilay nanao antsika ary afaka milaza amintsika. Mahafantatra antsika tsara kokoa noho isika
Izany no mendri-piderana! Izy no Tsy mba tahaka antsika. Andriamanitra dia tsy nahita zavatra avy. Izy no tsy mbola diso. Izy no tsy mbola gaga. Izy no tsy maintsy hijery na inona na inona. Ary na oviana na oviana ny nanao fanapahan-kevitra alohan'ny fahazoana ny zava-misy rehetra. Fantany ny zavatra rehetra!
Tsy izany ho tianao ny hatoky Azy?
Tokony ho. Fa araka ny efa voalaza aho, ny sasany amintsika mihevitra tena loatra ny tenantsika. Ary izay no betsaka satria hanadino izany ampahatelony. Tsy manadino fa isika ihany koa tapaka.
Tsy izahay ihany no mahatalanjona ny nanaovana; isika koa dia tapaka. Hoy ny Baiboly izahay, Izy no nahariana ny Andriamanitra araka ny endriny. Tsininy izahay, ary mifandray tanteraka ho an'Andriamanitra. Fa rehefa niditra ny fahotana izao tontolo izao, izany fiantraikany antsika rehetra. Ary raha mbola nampiasaina mba ho izahay rehetra, izao isika tapaka. Ny latsaka dia toy ny kristaly tsara tarehy sary sokitra ho nandatsaka. Izany manorotoro. Ary misy aretina, fahafatesana, ary ny ratsy indrindra ny fahotana rehetra.
Vao avy nahazo izany iPhone tsy ela loatra lasa izay. Tena miasa tsara. Aho raha tsy mbola nahazo vaovao ity indray ny iPhone dia mahatahotra. Dia nandatsaka izany ny fotoana rehetra, toy izany koa ny varavarana lamba dia triatra. Izany no tena tsy mora. Izany foana nianjera ahy. Tsy te-handany ny vola amin'ny iray vaovao mbola anefa. Rehetra izao, ary avy eo hisambotra ny tenako aho nitaraina momba ny fomba mahatsiravina ny finday dia. Fa avy eo aho back tsarovy ny fomba finday ampiasaina ho. Ny voalohany nahazo finday aho dia iray amin'ireo voalohany amin'ny miloko efijery. Nihevitra aho fa mahagaga.
Fa ny misavorovoro ny iPhone dia tapitrisa heny noho izay voalohany no nahazo finday. Tonga saina aho dia mety ho misavorovoro ny, saingy mbola mahavariana. Mety ho mora sy vaky, nefa mbola mahita Fahitana Momba ny amazingness. Mbola maka sary tsara eo aminy. Mbola mahazo ao amin'ny Internet izany. Mbola misintona zavatra eo amboniny. Manana Apps sy ny lalao teo amboniny. Apple nanao asa iray mahatalanjona tamin'izany finday. Izany finday Nahafinaritra, fa torotoro.
Toy izany koa, Andriamanitra nanao ny asa mahagaga antsika, fa torotoro. Raha mijery anay, ianao dia mbola afaka milaza izahay zavaboary mahatalanjona, fa izay koa mazava fa isika tapaka. Tsy haharitra mandrakizay. Tsy harary sy ho faty. Isika mandratra ny kitrokeliny. Tsy hahatsiaro zavatra ny fitsapana. Isika haratra hafa. Ary isika manota Andriamanitra.
Ve ianao mieritreritra fa ny zava-misy marina fa ianao tapaka? Ny ankamaroantsika dia mandeha amin'ny alalan'ny fiainantsika mihevitra ho manana ho tsara fotsiny izahay. Izahay vao mahazo voafitaka, satria toa tsy misy hafa noho ny hafa manodidina antsika. Fa ny marina dia, isika rehetra notapahina. Te-hijery fomba roa voalohany indrindra fa torotoro.
voalohany, ara-batana isika tapaka. Rehefa tanora ianao miaina ambanin'ny fahatsapana izay isika vao manao tsara. Ary izahay afaka mihevitra fa noho isika tsy mahita famantarana ny brokenness mbola. Angamba kely famantarana, fa tsy miraharaha azy ireo. Toy rehefa ny vadiko dia fiara Ford ny Explorer. Ary nanomboka ny hanao tabataba, fa izy kosa nandroaka azy io foana fotsiny. Herinandro vitsivitsy taty aoriana izahay fiara niverina avy Chesapeake Bay sy ny kodiarana efa nanapaka. Raha tokony ho tsy firaharahana ny famantarana, tokony ho mailo isika ny azy.
Olona iray ao amin'ny Baiboly, izay natao hanampiana antsika akaiky izao tontolo izao lavo Joba. Ny zava-drehetra dia halaina aminy. Ao afovoan'ny ny fitarainana momba ny toe-javatra dia maneho ny toetry ny olombelona rehetra. Ity izay lazainy:
“Ny olona izay tera-behivavy dia vitsy andro sady vontom-pahoriana. Tonga toy ny voninkazo ka malazo; dia mandositra toy ny aloka sy tsy mitohy.” (Job 14:1-2)
Joba dia nilaza fa ny andro tsy manam-petra. Tsy manana manam-petra ny taona maro mba hiaina. Rehetra isika ho faty indray andro. Mety ho avy tahaka ny voninkazo tsara tarehy, Fa raha izahay kosa halazo. Rehefa miresaka ny momba antsika halazo, dia midika hoe ny vatantsika dia tsikelikely nakaton'ny antsika. Ny hatsaran-tarehiny dia halazo sy simba. Tsy foana zareo handeha hiasa sy tahaka ny anaovany izao. Ary amin'ny farany dia ho faty isika. Ary rehefa mampitaha antsika ny aloka, dia ny miresaka fa ity fiainana ity dia tsy maharitra. Tsy mety ho levona.
Namaky ny Time magazine lahatsoratra ankehitriny mitondra ny lohateny hoe: "Afaka Google Voavaha Fahafatesana?"Ny lahatsoratra niresaka momba ny fatra-paniry laza orinasa sy ny fomba tiany ny hitifitra ny volana. Tsy misy habetsaky ny siansa sy ny teknolojia izay afaka mamaha ny olana ny fahafatesana. izany no mitranga. Ny fahafatesana dia zava-misy fa tsy afaka mamaha Google.
Koa Eny, isika mahatalanjona ny nanaovana. Izahay indrindra amin'ny zavaboary mahavariana ampahany, fa nanomboka ny fahalavoana isika ihany koa tapaka.
Ny brokenness mampahatsiahy antsika fa tsy Andriamanitra izahay. Tsy tokony hieritreritra isika fa ny tanora vatantsika izay miasa tsara ankehitriny ireo zavatra Ho manana mandrakizay. Izany no antony tsara ho antsika hoe eo am-tatỳ aoriana, mba hanompo an'Andriamanitra.
Toy izany koa ny fomba voalohany isika dia tapaka ny ara-batana. Fa isika koa dia tapaka lafiny ara-panahy.
"Tsy misy marina, tsy misy, tsy misy; tsy misy olona mahalala; tsy misy mitady an'Andriamanitra. Rehetra efa nivily; miara-dia tonga zava-poana; tsy misy manao ny tsara, na iray akory aza. Ny tendany fasana misokatra; izy ireo mampiasa ny lelany mba hamitaka. Ny poizin'ny menarana no ao ambanin'ny molony. Ny vavany Feno ozona sy fangidiana. Ny tongony mimaona handatsa-drà; eo amin'ny alehany dia faharavana sy ny fahoriana, Ary ny lalan'ny fiadanana tsy fantany. Tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra eo anoloan'ny masony. " (Romanina 3:11-18)
Io andalan-teny no ao amin'ny bokin'ny Romanina i Paoly izay manomboka vita momba ny fomba rehetra nanota Andriamanitra. ary eto, Ity ny ankapobeny nilaza ny Jiosy, eny na dia ianao. Isika rehetra.
“Azo antoka fa tsy misy olona marina ambonin'ny tany izay manao tsara ka tsy manota.” (Mpitoriteny 7:20)
Ary ny antony matetika mieritreritra ny olona tsara izahay dia ny faneva no refesina amin'ny: iray hafa. Koa mazava ho azy raha oharina amin'ny olon-kafa ny tsara aho olona. Tsy hamono olona. Aho tsy mpampihorohoro. Ary noho izany, Aho olona tsara, marina? Tsy araka ny Baiboly. Avy amin'ny fomba fijery olombelona, antoka fa afaka ny ho tsara ny olona. Inona anefa no tena tokony ho liana eo dia ny fomba fijery.
Ary rehefa mandeha ny alalan ', tena tsy afaka miady hevitra aminy. Izany marina rehetra.
Ary jereonareo fa izy no mahatonga ny tranga fa ny zavatra rehetra ao amintsika dia misavorovoro ny-tsaina, tenda, fiteny tsy fantatra, molotra, vava, feet, -maso antsika rehetra! Tsy tsara izahay vahoaka Nanao Zava-dratsy indraindray. Izahay mpanota ny olona izay manota matetika. Manana fo marary.
Ho isika matetika hoe takatsika izany fahamarinana izany, nefa tsy mampiseho ao amin'ny fomba fiainantsika ny fiainantsika. Isika hoe fantatsika isika tapaka, fa izahay vonona ny hiaiky fa tsy marina izahay amin'ny toe-javatra. Rehefa misy olona miampanga antsika, voalohany valin-, fa tsy ny fandinihan-tena, foana ny hiaro ny tenantsika. Angamba isika miady hevitra fotsiny, na angamba fa tsy manome tsiny azy ireo isika. Raha mahatakatra isika dia tapaka, dia angamba tokony handinika ny tenantsika fotsiny aloha. Ianao tsininy, izay midika hoe afaka ho diso.
Ary ahoana ny momba izany-dia tsinontsinona ny olona hafa ao amin'ny ny fahotany. Tahaka ny tsirairay avy amintsika tsy tapaka sy mila ny Mpamonjy ihany. Tsy misy afaka milaza hoe ry zareo tsara noho ianao, ary tsy afaka milaza ianao tsara noho izy ireo. Mety manao fahotana ratsy kokoa noho ianao, fa izahay tapaka rehetra mpanota mila Mpamonjy tonga lafatra. Na dia ratsy, dia miankina amin'ny tenantsika mba ho any an-danitra.
Manana toe-po sy ny fo ny zava-drehetra izay tonga avy amin'ny. Noho izany efa tahaka ny siny feno rano izay mahazo voapoizina. Rehetra fitaratra ianao dia haidiny eo am hatao voapoizina. Koa sary an-tsaina fa ny hafa dia ny hevitrao solomaso, fihetsika, faniriana, ary ny fanapahan-kevitra. Izany rehetra izany dia voaloto.
Izahay izany no fanaon'ny amin'ny ota fa tsy mihevitra fa lehibe fifanarahana, nefa. Ny fahotana no zavatra izay miaro antsika avy amin 'Andriamanitra. Ny fahotana no zavatra izay hiaro antsika amin'ny fiainana mandrakizay. Mety hieritreritra isika mampatahotra ny olona na ny toe-javatra ratsy ny ratsy indrindra no fahavalo. Ny tena ratsy indrindra fahavalo, izay mahay manao antsika ny tena fahavoazana no amin'ny fahotany. Zavatra hafa mety hanimba antsika izy aloha, fa noho ny fahotana dia mety ho voasazy mandrakizay. Tena fahotana izay mahatonga antsika ho fahavalon'Andriamanitra.
Ny sasany amintsika mihevitra fa mbola tsy nanao heloka bevava lehibe. Fa ny heloka bevava ratsy indrindra amin'ny rehetra ny amin'ny Izao Rehetra Izao dia ny hanota amin'Andriamanitra. Izy ambony lavitra noho ny fahefan'ny polisy manamboninahitra, na ny filoham-pirenena. Izy Andriamanitra! Ary na dia efa tsy namono, ny zava-misy fa efa nandainga dia mbola heloka bevava mahatsiravina an'Andriamanitra.
Izahay dia toy ny fitaratra tapaka. Tsy manome taratry ny endrik'Andriamanitra, fa tsy tahaka isika tokony. Izany zavatra natao mba hanao. Kosa dia maneho ny ratsy tarehy diso sary. Ny fitiavana mivily hila. Ny faniriana mba hanome mitodika ny fitiavan-karena. Fanoloran-tena mivadika ho fanompoan-tsampy. Izany ota rehetra, ary Andriamanitra mankahala azy.
Izay ny vaovao ratsy. Inona no vaovao tsara?
Heverinay ihany no tsara ho any an-danitra ny olona, ary izany marina amin'ny heviny. Fa tsy misy amintsika tsara. Noho izany dia mila olon-kafa mba hanome antsika ny zava-tsoa. Izany olona i Jesosy.
Midika izany tsy afaka mametraka ny fanantenantsika eo amin'ny ara-batana na ara-panahy tenanareo. Ry zareo tapaka ary mamela antsika. Tsy tsara izahay ampy. Mila antsika i Jesoa mba hametraka indray miaraka.
Raha ara-panahy fotsiny izahay tapaka, na ara-batana fotsiny tapaka, angamba dia tsy ho toy ny lehibe ny fifanarahana. Just ara-batana, izany tsara satria rehefa maty tsara izahay. Na ara-panahy fotsiny, Ho isika na oviana na oviana tsy maintsy miatrika 'Andriamanitra, satria tsy ho faty mandrakizay isika, Ho. Fa na fomba Ho mitsangana eo anatrehan'i Andriamanitra masina, izay tsy faly tamin'izy ny fahotanay.
Fantatrao ve ianao mahantra? Tsara ny vaovao tsara dia hoe afaka ny ho voavonjy ianao. Misy ny Mpamonjy, izay mahafeno ny lehibe indrindra mila.
"Ny famonjena dia hita ao amin'ny tsy misy olon-kafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena. " (Asan'ny Apostoly 4:12)
I Jesoa no hany afaka hamerina indray izay zavatra tapaka. Izy irery ihany no afaka miverina ho antsika amin'Andriamanitra. Izy no hany fanantenantsika. Satria maty noho ny fikomiana. Nitsangana avy tao am-pasana. Izahay efa Nokorontanin'ny ny ny volavolan-dalàna. Nandoa izany rehetra izany i Jesosy.
Koa mba recap: iza ianao?
Andriamanitra miahy antsika, satria efa nanao antsika. Izy manatrika ary mbola manaiky antsika toy ny satro-boninahitra ny zavaboary. Fa hitany fa mahatahotra isika tapaka. Izahay mila ny Mpamonjy.
Tsy tokony hieritreritra ianao eto Kristianina amin'izao andro izao, satria ianao efa any am-piangonana. Raha tsy tena niaiky fa ianao tapaka, fa efa nanafintohina Andriamanitra, fa mila Mpamonjy. Raha tsy miala amin'ny fahotana. Raha toa ianao tsy matoky an'i Kristy, dia ianao tsy zanak 'Andriamanitra.
Tamin'ny fotoam-pitsarana manaraka, Ho isika miresaka momba ny fomba mandany antsika ho ny fianakaviany. Andao hivavaka.
1. Ahoana no ny hoe nanao antsika Andriamanitra hanova ny fiainantsika? Inona no fahasamihafana izany no ho amin'ity herinandro ity?
2. Ahoana no manova ny fiainanao nahalala fa Andriamanitra mahita ny rehetra? Inona no fahasamihafana no manao fa mahafantatra antsika akaiky?
3. Inona no tsapanao ny hahafantatra ianao ho faty indray andro?
4. Ahoana no maneho brokenness ara-panahy ao amin 'ny fiainantsika?
5. Ve ny zava-misy fa tsy misy amintsika no tsara midika fotsiny isika hanaiky izany ka ho velona toy izany?
6. Inona Marina no Atao hoe mba hibebaka amin'ny fahotana sy mino an'i Jesoa?
Michael manaikitra • March 4, 2014 amin'ny 9:46 PM • navalin'i
Tena mahatahotra tapa-fahalalana sy fampianarana. Fitahiana be dia be teo aminy
Allan • March 5, 2014 amin'ny 3:36 PM • navalin'i
Izany no tena Andriamanitra anie hitahy anao good.May.
glore • March 6, 2014 amin'ny 11:23 aho • navalin'i
Love Bro. Fantatra aho anareo noho ny mozika sy ny manan-talenta amin'ny izany saha izany koa. Great toriteny. Tsy miandry ny manaraka.
Solomon King • March 12, 2014 amin'ny 6:27 PM • navalin'i
I mahatsiaro ho sambatra, Voatahy aho!
Tsy miandry ny famaranana anjara.
MichaelSmith • March 14, 2014 amin'ny 12:34 PM • navalin'i
Trip, misaotra anao noho ny manana marim-pototra toy izany ny mozika hihaino, ary misaotra fa ireo fampianarana ireo. Efa lehibe izy ireo ny hihaino ny fampianarana sy fampaherezana, Mivavaka aho fa mbola hitahy anao, ary indray andro dia mahazo ny miaina ny fampianarana mivantana.
Payne • March 19, 2014 amin'ny 7:06 aho • navalin'i
Izany no lehibe! Rahoviana ny manaraka 2 horonan-tsary ho afaka?
Juan • March 19, 2014 amin'ny 10:49 PM • navalin'i
Lehibe ny hafatra miverina Lee fitiavana ny fomba rehetra nataony mikasika rehetra miaraka dia lehibe ny mahafantatra fa tsara aho nanao Andriamanitra anie hitahy be dia be anao sy ny fianakaviana
Ariel • March 25, 2014 amin'ny 7:39 PM • navalin'i
Izany no toriteny lehibe toy izany. Tena nanampy ahy ny tonga saina fa ny fomba fisainana ny tenako dia tena ratsy. Andriamanitra no tena mampiasa anao!
koa ny kristianina • Aprily 23, 2014 amin'ny 1:16 aho • navalin'i
Origine et histoire de
Leo • Desambra 11, 2015 amin'ny 10:43 PM • navalin'i
tena tsara, toriteny sy ny tanora dia mila!